Nhau - Izvo Zvehupfumi uye Zvemagariro Bhenefiti reusable Yekutakura Kuteedzera NARICK LEBLANC
Izvo Zvehupfumi uye Zvemagariro Bhenefiti reusable Yekutakura Kuteedzera NARICK LEBLANC
Ichi chinyorwa chechipiri mune matatu-chikamu akateedzana naJerry Welcome, aimbova purezidhendi weReusable Packaging Association. Chinyorwa chekutanga ichi chakatsanangura kugadziriswazve kutakura kwekutakura uye basa rayo muketani yekupa Chinyorwa chechipiri ichi chinotaura nezve hupfumi uye zvakatipoteredza mabhenefiti ekugadziriswa kwekutakura zvekufambisa, uye chinyorwa chechitatu chinopa mamwe ma parameter uye maturusi ekubatsira vaverengi kuona kana zvichibatsira kushandura zvese kana imwe yekambani imwe-yenguva kana isina-kushandisa-kutakura kutakura ku reusable yekufambisa yekurongedza system.
Kunyangwe paine akakosha ezvakatipoteredza mabhenefiti anehukama neanoshandiswazve kutakura kurongedza, mazhinji makambani anochinja nekuti inovachengetera mari. Reusable kutakura kurongedza kunogona kuwedzera yepazasi mutsara wekambani munzira dzinoverengeka, kusanganisira:
Yakagadziriswa ergonomics uye kuchengetedzeka kwevashandi
• Kubvisa kucheka kwebhokisi, zvinodyiwa uye pallets zvakaputswa, zvichideredza kukuvara
• Kuvandudza kuchengetedzeka kwevashandi nema ergonomic akagadziriswa uye masuo ekupinda.
• Kuderedza kukuvara kumashure nehuremu hwakaenzana hwekuputira uye zviyero.
• Kufambisa mashandisirwo emakeke ekutengesa, ekuchengetera racks, kuyerera racks uye simudza / tilt zvishandiso zvine zvakaenzana midziyo
• Kuderedza kutsemuka uye kudonha kukuvara kuburikidza nekubvisa mu-zvirimwa marara, senge akarasika ekurongedza zvigadzirwa.
Kugadziridzwa kwemhando yepamusoro
• Kuderera kwechigadzirwa kunoitika nekuda kwekutakura kwekutakura kutadza.
• Kuwedzera nemarori uye kurodha doko mabasa anoderedza mutengo.
Midziyo ine mweya inodzora nguva yekutonhora yezvinhu zvinoparara, kuwedzera kutsva uye pasherufu-hupenyu.
Kuteedzera zvinhu zvinoderedza
• Hupenyu hwakareba hwakareba hwekutakurisa zvekufambisa zvekurongedza zvinoguma nekurongedza zvinhu zvemari yemasendi parwendo.
• Mutengo wekurongedza zvakare kutakura zvinhu unogona kupararira pamusoro pemakore mazhinji.
Yakaderedzwa marara manejimendi
• Kuderedza marara ekugadzirisa marara kana kurasa.
• Kushomeka kwevashandi kunoda kugadzirira marara ekuti ishandiswe zvakare kana kuraswa.
• Yakaderedzwa marara ekushandisa patsva kana kurasa.
Maguta emunharaunda anowanawo bhenefiti yezvehupfumi kana makambani achichinjira kumashandisirwo ekufambisa ekufambisa. Kuderedza sosi, kusanganisira kushandiswazve, kunogona kubatsira kudzikisa marara ekurasa uye ekugadzirisa mashandiro nekuti zvinodzivirira mutengo wekushandisazve, mataundi macomposting, kuzadza pasi uye kupisa moto.
Reuse zano rinoshanda rekutsigira zvinangwa zvechengetedzo yekambani. Pfungwa yekushandisa zvakare inotsigirwa neEnvironmental Protection Agency senzira yekudzivirira marara kuti asapinda murukova rwemarara. Sekureva kwa www.epa.gov, "Kuderedza sosi, kusanganisira kushandiswazve, kunogona kubatsira kudzikisa marara uye kushandisa mari nekuti zvinodzivirira mutengo wekushandisazve, mataundi emakomputa, kuzadza ivhu, uye kupisa. Kuderedza sosi kunochengetedza zviwanikwa uye kunoderedza kusvibiswa, kusanganisira gasi inodziyisa kupisa inokonzera kudziya kwepasi. ”
Muna 2004, iyo RPA yakaita Life Cycle Analysis kudzidza naFranklin Associates kuyera kukanganisa kwezvakatipoteredza kwemidziyo inogadziriswazve maringe neiyo iripo nzira inoshandiswa mumusika wezvibereko. Makumi gumi emichero matsva ekushandisa akaongororwa uye mhedzisiro yakaratidza kuti inoshandiswazve kurongedza pavhareji yaida 39% kushoma simba rese, yakaburitsa 95% shoma simbi yakasimba uye yakaburitsa 29% kushomeka kuzere gasi yekupisa gasi. Mhedzisiro iyi yakatsigirwa nezvakawanda zvinotevera zvidzidzo. Mune akawanda mafomu ekushandisa anotakurika ekufambisa masystem anoguma mune anotevera akanaka maitiro ezvakatipoteredza:
• Kuderedzwa kwekudiwa kwekuvaka zvivakwa zvinodhura zvekurasa kana zvimwe zvekurasa marara.
• Inobatsira kusangana nenyika uye matunhu ekurasisa zvinangwa.
• Inotsigira nharaunda.
• Pakupera kwehupenyu hwayo hunobatsira, kutakurika kwakawanda kwekutakurisa zvinhu kunogona kutarisirwa nekudzokesa mapurasitiki nesimbi uku uchikuya huni dzekudyara mulch kana zvipfuwo zvekuwaridza.
• Yakaderedza gasi inokanganisa kupisa uye simba rese rekushandisa.
Kunyangwe zvinangwa zvekambani yako kudzikisa mutengo kana kudzikisira tsoka yako yezvakatipoteredza, kutakurika kwekutakura zvakapakurwa kwakakodzera kuongorora.